Abaziveze abantshontsha ugesi | News24
Abaziveze abantshontsha ugesi
SEKUVELE kwacaca njengekati ehlungwini ukuthi ukwebiwa kukagesi kuyinsakavukela umchilo wesidwaba ezindaweni eziningi njengalokhu sekuvele nokuthi osomabhizinisi ngisho enkabeni yedolobha nabo bayawenza lomkhuba.
Kamuva nje ucwaningo olwenziwe ngumasipala waseRay Nkonyeni luveza ukuthi abantu abaningi banezigubhu ezicushiwe lokho okwenza kudleke kakhulu labo abawukhokhelayo futhi abaziphethe kahle ekulandeleni umthetho.
Esithangameni sabezindaba uMeya womkhandlu uCynthia Mqwebu ekhuluma uthe umkhandlu uthole ukuthi iningi labantu liyawuntshontsha ugesi lokho okwenza ukuthi kugcine sekuba khona ukuxhaphazeka kulabo abawukhokhela ngokusemthethweni.
Kamuva kuke kwavela ukuthi izindawo zakoMurchison, Boboyi, Nyandezulu, Mkholombe iningi labantu abanemiqasho ugesi wakhona usuke ucushiwe ekubeni usuke uphakela inqwaba yabantu ngalesosikhathi.
Omunye ongathandanga ukuba kudalulwe igama lakhe uveze ukuthi yena indawo aqashe kuyona inezindlu ezingaphezu kwezingama-20 kodwa selokhane ahlala kuyona leyondawo iminyaka engaphezu kweyisikhombisa akakaze nangolulodwa usuku akhokhe noma ezwe kuthi kumele akhokhele ugesi kodwa awupheli uhlala ukhona
Uthe inkinga iqala uma kungukuthi uke wahamba lapho uvele kuwe iswishi phezulu esigxobeni bese kuphoqeleka ukuthi akuphele izinsuku umphakathi ungenawo ugesi.
Uthi uMqwebu bonke labo abayizaphulamthetho kufanele bazilethe bona kwamasipala ukuze kwenziwe izinhlelo zokuthi bakhokhele ugesi ungaze kube ngukuthi umkhandlu uzibambela wona mathupha njengalokhu beyogcina sebethathelwa izinyathelo ezinqala impela.
“Abeze bazoziceba ngoba uma sike sazibambela thina, sisho ikakhulukazi laba bamabhizinisi njengalokhu bexhaphaza labo abawukhokhelayo izijezo zabo angeke zibe lula nakancane.